Hatezerana Mafy Tao Shina Vokatry Ny Fepetra Napetrak’i Hong Kong Momba Ny Vovo-dRonono · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Marsa 2013 15:01 GMT
Ny andro voalohany nampiharana ilay fandraràna vaovao izay mamehy ny mpandeha tsy hitondra vovo-dronono fanome ny zaza mihoatra ny 1.8 kg ivelan'i Hong Kong, dia olona 10 no tratran'ny manampahefana miandraikitra ny sisintany nandika izany lalàna vaovao izany. Nihatra nanomboka ny 1 Martsa 2013 izany fitsipika vaovao izany. Lehilahy iray, 47 taona no voasambotra ny 2 Martsa, ka nanefa lamandy 5000 HKD [zh] (eo ho eo amin'ny 650 USD). Lamandy 500.000 HKD ary 2 taona an-tranomaizina kosa no sazy farany ambony indrindra amin'ny famoahana antsokosoko vovo-dronono ivelan'i Hong Kong.
Nizarazara be ihany ny hevitr'ireo filazam-baovao shinoa any amin'ny taninbe mikasika izany politika izany. Nitsikera [zh] izany politika izany ho toy ny ”efa vita fa tsy maninona” izay mamiravira ny lalàna fototry ny tsena malalaka ry zareo mpilaza vaovao ao amin'ny Gazety Global Times. Etsy andanin'izany, CCTV sy ny China Daily dia nanamafy tao anatinà fanehoankevitry ny bilaogy madinik'izy ireo [zh] fa ny indostrian'ny ronono shinoa ao amin'ny tanibe mihitsy no manan-tsiny amin'ny toe-javatra miseho amin'izao fotoana izao io.
Raha lazaina fa maro ireo Shinoa any amin'ny tanibe no tsy mahafantatra fa ireo mpanondrana antsokosoko no katsahan'izao politika izao fa tsy ireo olon-tsotra mpandalo, dia maro no tafintohana, indrindra mikasika ilay sazy 2 taona an-tranomaizina. Lehilahy shinoa iray Mpandraharaha ara-barotra fanta-bahoaka momba ny Trano avy any amin'ny tanibe, ao Pan Shiyi [zh], namaritra ilay politika ho toy ny dika moderina an'ilay horonantsary “Les Miserables” [Ireo Fadiranovana]:
Ny Filoha Mpitantana teo aloha ny Google Shinoa, Lee Kai-fu, manamafy [zh] fa ny governemanta Shinoa sy ny governemanta Hong Kong miaraka mihitsy no samy manan-tsiny amin'izao toe-javatra mahasosotra izao:
Nanompa an'i Hong Kong [zh] i Ah Qiang, mpitantana ny PFLAG ao Shina, :
Satria efa maro dia maro ireo firenena no mandràra ny fanondrànana vovo-drononon-jaza, kivy ireo ray aman-dreny shinoa mitady izay ronono mahasalama ho an-janany. Zhen Yuanji mpanoratra bokin'ankizy nitalaho [zh] ihany koa:
Ny mpibilaogy madinika “Shily Child” no nampatsiahy [zh] an'ireo olona izay tsy faly tamin'ilay politikan'i Hong Kong mikasika ny tantaran'i Zhao Lianhai, mpikatroka iray nafàna fo nandritra ilay raharaha mahavalalanina mikasika ny vovo-dronono tamin'ny taona 2008 izay anah-voampanga azy higadra mandritra ny 2 taona sy tapany noho ny nandraisany anjara nanohitra ny governemanta.